190109 165513 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00089 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-89 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 165615 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00090 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-90 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 165715 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00302 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-302 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 165815 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00301 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-301 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 165915 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00381 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-381 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 166015 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00382 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-382 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 166114 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00116 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-116 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 166214 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00115 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-115 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 166315 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00310 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-310 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 166414 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00309 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-309 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 166514 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00280 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-280 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 166615 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00279 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-279 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 166715 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00193 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-193 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 166817 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00194 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-194 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 166914 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00238 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-238 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 167015 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00237 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-237 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 167115 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00056 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-56 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 167214 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00055 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-55 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 167315 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00180 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-180 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 167416 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00179 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-179 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.